Pclinux os, sarudzo huru yemushandisi akajairwa | Kubva kuLinux
Pclinux os, sarudzo hombe kune mushandisi wakajairika
Ndinoyeuka zhizha rapfuura, senge gore rega rega ini ndakaenda kuzororo kuItari, panguva iyoyo ini ndaive ndichiri kushandisa Archlinux Uye sezvo pasina Internet mumba memhuri yangu, ini ndaifanira kutenga 3g Usb kiyi. Ndinoyeuka ndichiyedza kubatanidza muArch zvakadaro, asi nguva dzose mhedzisiro yakafanana, pakupedzisira haina kubatana neVodafone network.
Ipapo ndakayeuka distro yakauya nematurusi agadzirira, uye sezvo ini ndaive nediski neni, ndakariisa. Mhedzisiro yacho ndeyekuti ini ndakakwanisa kubatanidza otomatiki kubva kunetiweki centre ye PClinux OS. Pandakadzoka kubva kuzororo ndakadzima PCLinux Iwe zvakare, panguva iyoyo ini ndaive ndichiri kufarira kutsvoda, asi pakupedzisira iyo nguva yakapfuura, ndakatanga kushandisa Windows 7 nedingindira rechikoro (kuwana, kugona uye poindi yemagetsi) uye ipapo ndapedza kuisa OS X.
Ndakazodzokera ku Linux, Ini ndakaisa iyo LTS ye ubuntu 12.04 uye mushure memazuva mana ekuishandisa, gadziriso yakaipa yakandisiya ndisingakwanise kunzwa kurira, kunze kwemahedhifoni uye bhagi randakataura richiri rakavhurika ...
Ipapo ndakaedza Debian uye kunyangwe isina kushata, haisi yangu, kuisirwa kwevanotyairi AMD Semazuva ese pandinoshandisa Debian, zvaive zvisingaite kwandiri, kana ini ndikatangazve iyo pc zvese zvinofamba zvishoma nezvishoma, ndichifanira kunetseka nezve kusiya masosi, doko uye zvimwe zvinhu zvakanaka hazvichandiitire ini ndobva ndarangarira PCLinux OS.
PClinux OS Iyo yatove neayo ati catalyst madhiraivha nekutadza, uye zvinoshamisa mashandiro andinowana ari nani kwazvo kupfuura mune mamwe ma distros, zvakare ini ndinoona iyo desktop nekukurumidza pamwe ne bfs kernel.
Dambudziko nderekuti distro iyi haina kukodzera * shanduroiticos *, ndichiri kushandisa KDE 4.6.5 asi neizvozvo tinowana kugadzikana kukuru. Ndakafadzwa neyakaitwa giraidhi, asi panguva imwecheteyo ndakashamiswa kuona kuti ini pakupedzisira ndinoona bhaisikopo nekumhanyisa xvba vaapi, Ini handitambure zvakanyanya nekubvaruka, iri muUbuntu kunyangwe ndasarudza zvakadii uye ndasarudza sarudzo dze compiz, ini handina kukwanisa kuibvisa.
Neyokupedzisira Rusununguko, VLC 2.0, nzvimbo yekutonga ye PClinux OS zvinoyevedza, kutaridzika kwayo nekukasirawo zvakare, ine apt semaneja wepakeji, ese marudzi esoftware muzvinyorwa, senge monodevelop, qtcreator, kdevelop uye kuvepo kweiyo tsanga bfs, Inoita iyo Rolling Release distro sarudzo huru kune mushandisi akajairika, iyo inotiratidza kuti kugadzikana uye kuburitsa kuburitsa kunogoneka.
Dhawunirodha pclinux OS
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Pclinux os, sarudzo hombe kune mushandisi wakajairika
Kuverenga nezve About PCLinux OS peji inotaura kuti inoshandisa OpenOffice, ndeyechinyakare here kana kuti ndeimwe yemamwe mashoma distros ayo achiri kuisanganisira?
Ini ndinozvipindura, mumapeji eese mavhezheni inotaura nezve LibreOffice installer, LibreOffice Manager, saka raingova peji yechinyakare «About PCLinux OS»
Apo, rinopfuura rinopfuura gore rapfuura, ndakafunga kusiya Ubuntu uye kuyedza dzimwe sarudzo, iyi yaive yeimwe yekutanga distros yandaishandisa. Ini ndaida chaizvo kuchinjika kwayo uye nekumhanyisa, kunyangwe ini ndakaona kuti KDE yakanga isiri kushanda senge mune mamwe ma distros. Ini handigone kufuratira kuti yaiziva ese Hardware ye laptop yangu pasina matambudziko. iko kudzoka chete kwakaitika kwandiri kwaive padanho rekufananidza: panguva yekutanga, iyo skrini yakachinja resolution uye iwe waifanira kuita shanduko yemanyorerwo kana system yatanga. kunze kweizvozvo, hapana chimwezve. yakawanda software inowanikwa, inogara ichigadziriswa, uye yakawanda kugadzikana. chimwe chezvandinoda !!!
oh uye ini ndakanganwa, zvakavhuvhuta pfungwa dzangu kuti ndizviwanire ini Synaptic, hehe, zvaive zvakanaka.
Kuuya kubva kuMandriva, ndakashandisa iyi distro pane yangu Linux partition kwenguva yakareba uye yakanaka. Imwe yeakanakisa, anokurumidza uye akatsiga kuita kweKDE kwandakaona. Ini ndakaisiya kune dzimwe sarudzo dzemushandi wayo mukuru, Texstar, kwete kugadzirisa KDE, kana zvirongwa zvakaita seAmarok.
Kugara wakatendeka ku KDE, ikozvino ndiri kuyedza Kubuntu 12.04 uye zvinondikurudzira zvishoma uye zvishoma. Pamwe upe Mageia 2 kuyedza, kana kuti dzokera kuPcLinuxOS uye uputi maquirks eTexstar.
Pindura kuna Paefes
Wakaedza OpenSUSE here? Une iyo yazvino KDE (iyo yekuvandudza kuKDE 4.8.4 yakauya kwandiri nezuro), izvo zvazvino shanduro dzese maficha ipapo uye kuva, uye ine kugadzikana kukuru.
Ini ndaive zvakare Mandriva uye PCLinuxOS mushandisi, ikozvino ini ndiri mushandisi weOpenSUSE uye chokwadi ndechekuti ini ndiri kupfuura kufara nazvo.
Maonero ako anonakidza uye ini ndinogovana zvakazara zvaunotaura. Kunyangwe ini ndisina kumboshandisa Pclinux OS ini ndakapfuura danho rangu rekurwa nehurongwa uye nekuisa chinhu chimwe chete panguva. Ini Virtualized Arch, iyo yandisina kumbobvira ndaisa padhisiki, zvakapetwa kaviri sisitimu yakadonhedza zvekuvandudzwa mumuchina chaiwo, saka ndinoirasa chaiko.Ndiri mushandisi uye mudziviriri weDebian asi ndinofanira kubvuma kuti haisi yemushandisi wekupedzisira, metapackage system yake iri musoro kana iwe uchida kuve neyakaenzana. zvirongwa zvitsva.
Sa @VaryHeavy ndinofunga kuti OpenSUSE kugovera kukuru uye ndinoshinga kutaura kuti ndiyo yakagadzikana zvakanyanya nekutarisa kune wepakati mushandisi. Pandakaiisa ini ndakazviita chaizvo nechinangwa chekuityora ini ndakawedzera zvekunze zvinyorwa (zvakafanana kune Ubuntu's ppas) Ini ndakatowedzera iyo kde fekitori repositori uye kana iyo system ikava isina kugadzikana unogona kudzokera kune yekuvandudza repo eg yakapusa zypper dup kubva ku-repo-iwe-unoda kana kushanyira Vaka Sevhisi uye iwe une system neazvino Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti akawanda ma distros anoshandisa KDE, pakati pavo Chakra inotora kde yekubatanidza mapakeji kubva kuO OpenSUSE… .uye senguva dzose ini ndakaenda kune tangent haha.
izvo zvaunotaura nezve openSUSE repos ndizvo zvandinonyanya kufarira.
zypper kumusoro kubva repo…
Zypper kusvika pari LEEEENTO xD
zypper yakanga iine yakadzika bug yandakamhan'arira kuti ini handizive kana vakaigadziridza, asi pandakanga ndiine 30 megabytes vdsl yemovistar Spain, zypper yakandishandisa ipv6, uye ichitobvisa ipv6, yakaramba ichienda zvese chete pa50, yakakwira 60 kb / s, yaive change kambani uye iyo yakamira kuitika, zvakangoitika kwandiri ne openuse.
Zvanga zvichinonoka. Zypper yakavandudza zvakanyanya uye parizvino inoshanda mushe, inotora mabheji makuru ezvigadziriso nekukurumidza.
Kutaura kuti kuunzwa kwe delta-rpm kwaitawo basa rayo mukuvandudza manejimendi ekuvandudzwa, sezvo icho chete chikamu chepakeji iri mubvunzo chakashandurwa chinovandudzwa, nekudaro tichidzivirira kuve nekurodha pasi mapakeji akazara uye kusunungura yakawanda kurodha pasi traffic.
Saka iwe hauna kuyedza kuvhuraSUSE kubvira riini?
Ini ndakaisa probe kekupedzisira muna 11.4, muna 12.1 live usb haishande zvakanaka kunyangwe ndikazviita ne dd raira, uye kana ndichiisa crashea ...
Iwe ungadai wakazviedza neiyo "Imagewriter" application, iri mune OpenSUSE repositories, kubva kumuchina chaiwo semuenzaniso. Neichi chishandiso iyo Live USB haina kukundikana.
Ndichaedza kubva pamawindows ane vmware kuti ndione hehehe.Ndichakuudza.
Ini ndinozviita ne dd_rescue nekuti ndozvazvaive pawiki en.opensuse.org/SDB:Live_USB_stick asi sezviri pachena izvozvi zvangova ne dd
Mapurogiramu angu echinyakare haandinetse chero bedzi achishanda zvakakwana, izvo hazvina kumbobvira zvakandiomera kuti nditaure. Asi ini ndinofunga chinhu chega chandinofanira kuziva nezve PC-LinuxOS ndeyekuti iyo 32-bit vhezheni inouya nePAE kernel nekukasira, nekuti kana ndikashandisa iyo 64-bit vhezheni, ndichaenda kugehena nezvinhu zvakawanda zvandinoshandisa.
Izvo hazviite nekukasira zvine 32-bit bfs vhezheni iyo inongoziva chete 3,5 gigs, iyo paern kernel iri mune zvinyorwa uye iwe unogona kuiisa gare gare, kunyangwe ini ndaifarira kusaita panguva iyoyo.
(Ndiri kunyora kubva kune imwe pc)
Ndeupi musiyano uripo pakati pezviyo zviviri?
Iyo pae kernel inofanirwa kunge yakajairwa kernel yehupenyu hwese, uye iyo bfs ndiyo yakaitwa yekuvandudza mhinduro padesktop, ini zvechokwadi ndinoona iyo bfs kernel nekukurumidza zvakanyanya kupfuura zvakajairika tsanga, pane iyi pc kwandinayo chakra , Ndakazvinyora uye ini ndinonyatsoona mutsauko.
PCLinuxOS haina 64-bit vhezheni, ingori 32-bit vhezheni. Yakanga ichitaurwa kare kare kuti iyo 64-bit vhezheni yakanga yakarongwa uye mukuvandudzwa, asi kubva nhasi hapana chinhu chekongiri chinozivikanwa.
Iyo 64-bit iri mukusimudzira, muchokwadi iwe unogona kurodha pasi maisos. Ini pachokwadi handidi kuvhurwa, nzira yekugadzirisa zvinyorwa inoratidzika kunge inouraya kwandiri, mune iyo pclinux yakachena, kunze kweiyo openuse haiuyi nemadhiraivha epamutemo nekumisikidza uye chitarisiko hachisi chekuti chakanyatso chenjera, chakachena kde.
Kuti chitarisiko hachina kuchengetwa mu OpenSUSE? : S Ini handibvumirane zvachose, chaizvo OpenSUSE ndeimwe yeiyo inotarisira zvakanyanya uye iyo inonyanya kusanganisa KDE. Dai isu taizotaura nezve Fedora, saka ini handidi kupokana newe, nekuti izvo zvinouya nenzvimbo dzakachena, asi hazvisizvo neOpenSUSE. Izvo zvisingauyi nevatyairi vekutengesa nekutadza zvakajairika muLinux ecosystem.
Uye murume zveshuwa, kana tichienzanisa zvivakwa zveOpenSUSE neizvo zvePCLinuxOS, zvirokwazvo iri kunyanya kuiswa pakati muPCLinuxOS, muchokwadi kana ndisina kukanganisa inoshandisa dura rimwe rezvose. Zvakadaro, ini ndinogona kutaura kuti ini handisi kushaya chero chinhu muOpenSUSE, uye mapakeji anovandudzwa rinenge zuva nezuva, izvo zvandisati ndaona kusvika ikozvino mune chero mamwe ma distros andakashandisa.
Mukuonekwa kwe openuse izvo zvandinoona ndeye kde theme yeupenyu hwese ine girini kumashure ..., kwandiri izvo zvinoita sekunge hazvina hanya nechitarisiko, iwo mavara haazive kana iri mhaka yangu, asi vanoita kwete kuratidza chero kutsetseka, uye nzvimbo dzekuchengetera inyonganiso, nguva yekupedzisira pandakaibata ne12.1, ndakatyora kutsamira kwezvirongwa zvakati, ini ndiri distro yandisingakurudzire kune mumwe munhu anoda kuishandisa asina kudzidza zvakawandisa.
Izvi zvinoita kunge kwandiri kuti ndisatarise chitarisiko
Zvakanaka, inonaka mavara mushure mezvose.
Ichokwadi kuti masosi haana kugadzikana, ndicho chinhu chekutanga chandashandura kubva pakutanga, asi zvimwe zvese, zvakanaka.
Nezve kuzorora uye kutsamira ... zvakanaka, ini handizive kuti wakazviita sei, nekuti kana iwe ukagadzirisa pasuru kubva kuYaST inokuzivisa kana paine kupokana nekutsamira uye inokupa zviito zvakasiyana zvekutora, kubva pakuchengeta pasuru, kusvika kugadzirisa kutsamira kana kushandura iro dura repasipo, kana kubvarura pasuru iri panjodzi yako wega
Uye kazhinji hapana matambudziko nematura, kunyangwe mangani, asi zvakare unofanirwa kufunga kuti ndeapi akawedzerwa, semuenzaniso, haugone kushandisa yakajairika vhezheni yekuchengetedza panguva imwe chete uye iyo Tumbleweed repository (inova rolling-release mhando), nekuti zviri pachena pane imwe nguva chimwe chinhu chinotyoka. Kana kushandisa zvinyorwa zvemhando dzakasiyana dzeKDE zvakafanana, ndiko kuti, kana uine KDE 4.7 uye uchida kuichengeta, usawedzera KDE 4.8 repositori, kana kana iwe ukaisa KDE 4.8, bvisa iyo KDE 4.7 repositori, zvinhu zviri pachena, handiti?
Semuenzaniso, ini ndakagadzirisa zvakajairika zvinyorwa zveiyo vhezheni + dzimwe nharaunda idzo dzakandifarira + idzo dze KDE 4.8, uye ini handina kana dambudziko.
Yangu PC linux OS inondiita OS hombe, mumaAPPS ayo haina yechinyakare asi mu KDE SC, mune mashoma mazwi PCLOS iri uye haisi yevashanduri
Hongu, asi hapana nzira yekutarisa mamwe rondedzero yemapakeji kuti uzive kuti shanduro dzinoenda kupi uye nenyaya yese.
Ingo tsvaga shoma xd
inodaro 2010 asi pachokwadi ndivo vari kubva izvozvi xD
pkgs.org, vadiki padawans 😛
Ini ndanga ndakanganwa iyo tsananguro ... xD
Sarudzo huru pasina kukahadzika, zvakanyanya kuti ndinoramba ndichigara naChakra
neniwo !!!! Chakra Rules !!!! 🙂
Kuve wakatorwa kubva kune zvaari uye kuve nemaDrake ake, hazvishamise kuti zvakashanda sei kwauri 😉
Inotorwa kubva kunaani?
Yakagadzirwa naMandriva heheh
Sezvo pandev inokuudza, PCLinuxOS forogo yeMandriva, kunyanya, Mandrake 9.2 (Texar aive mugadziri weMandrake), kunyangwe yanga ichiwedzera zvese zvakagadziridzwa zvakaunzwa kubvira Mandriva, kunyanya madrakes.
MuPclinuxos unogona unasar kukodzera kana kungoita?
Ingori APT, kwaziso.
Imwe iyo iri Rolling Kuburitswa 😉
Pasina mubvunzo, chinguva chakapfuura iyo bvunzo, yakanakisa kuzivikanwa Hardware, iyo vhezheni yandaishandisa yaive vhezheni neLXDE.
Ichave yakanyarara sekutaura kwavo mutaundi rangu, asi zvandiri handife ndakakanganwira SuSE nekutengesa kwayo software yemahara, vane zvishoma zvekuita kuti vave Microsoft Linux.
Kwete handisi kutsika 🙂
Mintbox: iyo Linux Mint Mini PC